Benidorm bụ obodo nke skyscrapers - Ihe ị ga - ahụ ma mee n'ime ya | Njem zuru oke
Benidorm bụ obodo ma ọ bụ obodo dị na mpaghara Alicante, na Obodo Valencian. Ndi akuku miri juputara na Mediterenian, nime ya ka ayi huru ulo elu di elu, ya mere ana akpo ya 'Spanish New York'. Ya mere, otu n’ime ihe ukwu anyị nwere ike ime ebe a bụ ịnụ ụtọ ụsọ mmiri ya dịka Poniente, Levante ma ọ bụ Playa del Mal Pas na Cala Almadrava, tinyere ndị ọzọ.
N'ezie, a na-ahụkwa ntụrụndụ na ogige ntụrụndụ ya dị ka Terra Mítica ma ọ bụ Acualandia. Mana ọ bụ eziokwu na Benidorm ka nwere ọtụtụ ihe inyocha ma dị ka ndị dị otú a, ị nwere ike ime ya site na echiche ya dị ka La Cruz na Balcón del Mediterráneo. Anyị apụghịkwa ichezọ ógbè ndị Rom anyị hụrụ n'ógbè ahụ, dị ka Tossal de la Cala, nnukwu ugwu dị n'etiti osimiri.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere Punta del Cavall Tower, nke bụ ụlọ elu na-eche nche nke malitere na narị afọ nke 4. N'elu obodo ochie anyị na-ahụ ụka nke San Jaime na Santa Ana, nke ewuru na narị afọ XNUMX. Na mpaghara a, ị ga-agagharị nnukwu, ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka obodo ochie na ntakịrị n'ihu ị ga-ahụ Plaza de Santa Ana Ebe a gbara gburugburu XNUMX canyons.
Benidorm aghọwo 'New York nke Mediterranean'. Nke a bụ otu esi mara ebe a na nke ahụ bụ ...
Ihe ịga leta Benidorm
Mgbe anyị chere echiche banyere ihe ị ga-eleta na Benidorm, nhọrọ ndị ahụ gbakọtara n’isi anyị. Karịa ihe ọ bụla n'ihi na anyị na-eche ihu ...
por Ezigbo Benidorm eme 13 afọ .